I-UGREEN HiTune X6: ii-headphones ezisusa ingxolo nge-€40,49 nje | ndisuka kuMac
I-UGREEN HiTune X6: ii-headphone ezirhoxisa ingxolo nge-€40,49 kuphela
UIgnacio Sala | | Ezahlukeneyo
Xa uthengela ii-headphones ezingenazingcingo, inani leenketho ezikhoyo ngoku kwimarike liphezulu kakhulu, ukuba ukhetho lwethu aluhambi ngokuthenga nayiphi na imodeli eyahlukileyo ye-AirPods eyenziwa yi-Apple kuthi.
Ukuba ipokotho yakho ayikuvumeli okanye udiniwe kukuphulukana nee-AirPods zakho, kwiiNdaba ze-iPhone sikunika ukhetho olunomdla. Ndithetha nge UGREEN HiTune X6, ingxolo yokurhoxisa ii-headphones Yintoni esinokuyifumana kwiAmazon nge40,49 € ukuba sithatha ithuba lonikezelo esikubonisa lona kweli nqaku ukusuka nge-17 kuJanuwari ukuya kuma-23 kule nyanga, kuba ixabiso laso li-euro ezingama-59,90.
Ukuba ufuna ukwazi ulwazi oluthe kratya malunga nalo menzi, ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda.
1 Ngubani UGREEN?
2 Yintoni i-UGREEN HiTune X6 isinika yona
2.1 Ukucinywa kwengxolo esebenzayo
2.2 Imibhobho emi-6 yeencoko ezicacileyo
2.3 Ukubambezeleka okuphantsi
2.5 ukubhanqa lula
2.6 Iiyure ezingama-26 zokudlala ngetyala lokutshaja
2.7 Ukulawula ukuchukumisa
2.8 Ukuchasa al agua
3 Yintoni ebhokisini
4 Konwabele oko
Ugreen yenye ye abavelisi izincedisi endala kwimarike, umenzi osinika inani elikhulu leentambo, iitshaja, ii-HUBs, ii-iPhone mounts, ii-adapter zazo zonke iintlobo zoqhagamshelwano... iimveliso azithengisa kumazwe angaphezu kwe-100 kunye nabathengi abangaphezu kwezigidi ezingama-40 emhlabeni jikelele.
Okwethutyana ngoku, ukwabheja kwii-headphones ezingenazingcingo, imarike ekukhuleni okuqhubekayo kwaye ngalo lonke ixesha ibandakanya abakhuphisana abatsha.
NgeHiTune X6 entsha, lo menzi wandisa ngakumbi uluhlu lwayo lwee-headsets ezingenazingcingo athe wazinikezela ukuza kuthi ga ngoku. Kodwa, ngento entsha ebalulekileyo, kuba le yimodeli yokuqala yalo menzi ibandakanya inkqubo yokucima ingxolo esebenzayo.
Enkosi kule nkqubo yokurhoxisa ingxolo, singakwazi sizahlula kwindawo esihlala kuyo ngokupheleleyo ngaphandle kokuba iindlebe zethu zichaphazeleke ngokunyanzeliswa ukuba zinyuse umthamo ukuze sifezekise ukuzimela esikufunayo.
Yintoni i-UGREEN HiTune X6 isinika yona
Ukucinywa kwengxolo esebenzayo
I-UGREEN HiTune X6 zii-headphones ezinengxolo esebenzayo yokucinywa, njenge-Apple's AirPods Pro.
Ngombulelo wokucinywa kwengxolo esebenzayo, iHiTune X6 iyakwazi cima nayiphi na ingxolo yangaphandle okuya kusivumela ukuba sizimele ngokupheleleyo kwindawo esihlala kuyo siphepha ukunyusa isandi, nto leyo esivumela ukuba sonwabele umculo wethu esiwuthandayo nakweyiphi na imeko.
Ezi headphones ezintsha ze-UGREEN zibandakanya umqhubi we-10-millimeter oshukumisayo kunye ne-DLC diaphragm evumela isandi esicacileyo. ukuphepha ukugqwetheka komqondiso kokubini kwiifrikhwensi eziphezulu nezisezantsi.
Imibhobho emi-6 yeencoko ezicacileyo
Ii-headphone ezirhoxisa ingxolo zithatha isandi sangaphandle ukuze usirhoxise ukuze ukwazi yisuse kumjelo weendlebe zethu. I-UGREEN HiTune X6 idibanisa ii-microphone ezi-6 zizonke, ii-microphone ze-3 kwi-earphone nganye.
Le mibhobho iyakhathalela yahlula isandi kwindawo esingqongileyo ngexesha lokwenyani ukukhupha ilizwi elicacileyo lomntu ngokucinezela i-90% yengxolo ye-ambient ukusinika umgangatho ophezulu kakhulu wokufowuna xa kuthelekiswa nezinye ii-headphones ezingenazintambo ngaphandle kobu buchwepheshe bokurhoxisa ingxolo.
Ii-headphones ezingenazingcingo azizange zichazwe njengokhetho oluhle lokonwabela iimuvi okanye imidlalo yevidiyo, ngenxa yokubambezeleka. I-UGREEN HiTune X6 idibanisa imowudi yomdlalo enika i-latency ye-50 ms.
Ndiyabulela kule latency iphantsi, asiyi kuqaphela naluphi na uhlobo lokulibaziseka kwiaudio ngelixa sonwabela imidlalo yethu esiyithandayo okanye iimuvi kwisixhobo sethu, nokuba yi-iPhone, i-iPad, iMac, i-iPod touch...
Ukulawula ukuhanjiswa komsindo, i-UGREEN isebenzisa i 5.1 version yeBluetooth, evumela ukuba inikeze uqhagamshelo oluzinzile, olukhawulezayo noluhambelanayo olungenazingcingo ngayo nayiphi na i-iOS kunye nesixhobo se-Android.
Kwakhona, ibandakanya inkxaso ye-ACC kunye ne-SBC ukuhambisa i-bass eneenkcukacha ezinzulu kunye nesandi esikumgangatho ophezulu ngokubanzi. Okokugqibela kodwa kuncinci, kufuneka kukhunjulwe ukuba le nguqulo yebluetooth idla amandla amancinci kuneenguqulelo zangaphambili.
Nje ukuba siqhagamshele i-UGREEN HiTune X6 kwi-iPhone yethu, i-iPad okanye iMac, ngalo lonke ixesha sivula ityala lokutshaja, baya kuqhagamshela ngokuzenzekelayo kwisixhobo esibhanqiweyo sokugqibela.
Iiyure ezingama-26 zokudlala ngetyala lokutshaja
Ii-headphones ezivela kulo mvelisi zine ukuzimela kweeyure ezi-6 zokudlala ngaphandle kokusebenzisa ukucinywa kwengxolo. Ukuba siyenza isebenze, ngokomenzi, ukuzimela kuncitshiswe ngemizuzu engama-30 kuphela, kunye nokuzimela okupheleleyo kweeyure ze-5,5.
Ibandakanya a inkqubo yokutshaja ngokukhawuleza oko kusivumela ukuba songeze iyure yokusebenzisa iHiTune X6 ngemizuzu nje eli-10 yokutshaja. Ukuba asingxamanga, kwiyure enye enesiqingatha nje, singabahlawulisa ngokupheleleyo. Ityala lokutshaja lithatha iiyure ezimbini ukuhlawulisa ngokupheleleyo.
I-UGREEN HiTine X6 ayibandakanyi inkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo, ngoko siya kunyanzeliswa ukuba sisebenzise intambo ye-USB-C efakwe kwibhokisi ukwenza njalo.
Ngayo indawo yokubamba ebandakanya i-HiTune X6, sinokuvula kwaye sivale ukucinywa kwengxolo, sinqumame kwaye sidlale umculo, sixhome kwaye sithathe umnxeba, siye kwingoma elandelayo okanye yangaphambili kwaye uvule umncedisi welizwi.
Ukuchasa al agua
Ukuba ujonge ii-headphones ukuze uziqhelanise nezemidlalo, isisombululo esibonelelwa ngu-UGREEN sisebenza ngokugqibeleleyo ukusukela oko ibandakanya isiqinisekiso se-IPX5
Ibhokisi ye-UGREEN HiTune X6 ibandakanya iisayizi ezintathu zee-earplugs ukuze zilingane indlebe kubo bonke abasebenzisi, iiplagi ezenziwe nge-silicone ezinikezela ukubamba okukhuselekileyo kwaye ziya kubathintela ukuba baphume kuyo nayiphi na intshukumo ngokukhawuleza.
Kunye nee-earbuds, icala lokutshaja, kunye neesayizi ezintathu zeetamponi, ikwanjalo ibandakanya i-50 yeesentimitha intambo ye-USB-C ebhokisini ukuzilayisha kunye nencwadana yemigaqo yomsebenzisi yakudala apho siboniswa ukuba sizidibanisa njani nesixhobo sethu.
El ixabiso eqhelekileyo UGREEN HiTune X6 yi 59,99 euro. Kodwa, sithatha inzuzo yekhuphoni yesaphulelo ebandakanyiweyo kunye nekhuphoni FIGRH9JB phambi kokuba wenze intlawulo, ukuphela kwale ngxolo yokurhoxisa ii-headphones iyancipha ukuya kwi-40,49 euros.
Ukuthatha inzuzo yokunikezelwa, kufuneka usebenzise ikhuphoni (likwiphepha lemveliso) kunye nekhowudi esiyibonisile kumhlathi odlulileyo.
Olu nyuso kuphela iyafumaneka ngoJanuwari 17 ukuya 23. Unokuthatha ithuba lolu nikezelo kwaye ufumane ii-headsets zokurhoxisa ingxolo ngexabiso elifanelekileyo nge ikhonkco elandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-UGREEN HiTune X6: ii-headphone ezirhoxisa ingxolo nge-€40,49 kuphela
Ii-AirPods Max ngee-euro ezingama-415 kuphela kwiAmazon
I-Apple yokuvala i-loop kwi-Apple Silicon ekupheleni kwalo nyaka